Cali dheere ?ragga haysta Westgate waxay amar u qabaan in ay talaabo kasta qaadaan? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Seteembar 23, 2013 3:48 b 0
Baardheere, September 23, 2013 – Afhayeenka guud ee ururka Al-shabaab sheikh Cali Maxamuud Raage ayaa xalay daaha ka qaaday in saraakiisha ka tirsan shabaab ee haysta gurriga Westgate ay qaadi karaan talaabo hor leh, xili la sheegayo in ciidanka Kenya ay qabsadeen qaybo muhiim ah oo ka tirsan dhismaha.
Sheikh Cali Dheere oo la hadlay war-baahinta ku hadasha afka ururka Al-shabaab ayaa sheegay in ciidankooda gacanta ku haya dhismaha Westgate ee magaalada Nairobi, ay u fasaxan yihiin in ay talaabo ka qaadaan la haystayaasha Ajinebiga ah ee gacanta ugu jira.
?Mujaahidiinta fasax ayey u qabaan in ay talaabo ka qaadaan maxaabiista, kuwa gacanta ugu jira ee hadda ay haystaan talaabo ayey ka qaadi karaan markasta oo weerarku ku bato? ayuu yiri Cali dheere.
Afhayeenka ururka Al-shabaab Sheikh Cali dheere waxaa uu ku amray kooxda haysata gurriga Westgate in ay amar u qabaan talaabo kasta in ay qaadi karaan, waxaa uu sheegay in ciidamada Israel iyo kuwa Kenya ee gurriga horjooga ay ka guulaysan doonaan.
DHEGEYSO:- Sheikh Cali dheere oo la hadlay war-baahinta ku hadasha afka ururka Al-shabaab